ရုံးပတီသီးက ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ရုံးပတီသီးက ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး
ရုံးပတီသီးက ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး
Posted by ခင်ခ on Nov 2, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 27 comments
ရုံးပတီသီးက ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြု အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့အောက်ပါအတိုင်း ရရှိနိုင်တာလေ့လာတွေ့ရပါတယ်။
ရုံးပတီသီးမှာ Antioxidants ပါဝင်သဖြင့် သွေးကြောနံရံများ မာတောင့်ခြင်းကို ကာကွယ်သည်။ သွေးကြော နံရံများ မာလာရင် သွေးစီးနှုန်းနှေးပြီး စေးပျစ်ကာ သွေးခဲစေသဖြင့် အန္တရာယ် ရှိသည်။ ရုံးပတီသီးရှိ Vitamin C သည် ထိပ်တန်း အင်တီအောက်စီးဒင့်ဖြစ်ကာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ အန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေသည်။
ရုံးပတီသီး လက်ဖက်ရည်တစ်ပန်းကန်စာသည် ခရမ်းချဉ်သီး လက်ဖက်ရည်တစ်ပန်းကန်စာထက် ဗီတာမင်စီ ဓာတ်ပမာဏပိုများသည်။ထို့ပြင် Folate ဓာတ်သည်လည်း ထိုလက်ဖက်ရည်တစ်ပန်းကန်စာတွင် သင်နေ့စဉ် လိုအပ်ချက်၏ ၄၀ရာခိုင်နှုန်းပါ ၀င်ပြန်သည်။
ဖောလိတ်ဟုခေါ်သော ဗီတာမင်ဘီ တစ်မျိုးချို့တဲ့ပါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဟိုမိုစစ်စတင်းခေါ် Amino Acid များထွက်လာပြီး သွေးထဲမှာ ဟိုမိုစစ်စတင်းတွေ သိပ်များလာပါက သွေးကြောများကျဉ်းစေသည်။ နှလုံးသွေး ကြောကျဉ်းရောဂါနှင့် လေဖြတ်ရောဂါဖြစ်စေသည်။ ဒါကြောင့် ရုံးပတီသီးစားပေး လျှင် နှလုံးနှင့်သွေးကြောများ ကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
ထို့အတူ Potassium၊ Magnesium တို့ကြွယ်ဝသဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်ကိုနည်းစေသည်။ ဤရုံးပတီသီးကိုစားခြင်း ဖြင့် သွေးတိုးရောဂါရှိလျှင် လျှော့ချကာကွယ်နိုင်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့လိုသူတွေအတွက်လည်း ကောင်း သည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်သည် ကိုလက်စထရောနှင့် သွေးတိုးရောဂါကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ နှလုံးခုန်စီးချက်နရီမှန်စေ ခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါနှင့် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
အမျိုးသမီးတွေ သွေးဆုံးလျှင် အရိုးပါးရောဂါအဖြစ်များတတ်တာမို အသက်၄၀ကျော်တာနဲ့ရုံးပတီသီးနေ့စဉ် စားဖို့ပြင်ထား ပါ။ ရုံးပတီသီးမှာ အရိုးပါးရောဂါတိုက်ထုတ်ပေးမယ့်ဖိုက်တာ ၄မျိုးတောင်ပါသည်။ (၁) ပိုတက် စီယမ်၊ (၂) ဗီတာမင်စီ၊ (၃) မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် (၄) ဘီတာကာရိုတင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဤဓာတ်၎မျိုးမြင့်မားစွာ ပါ အောင် စားနိုင်တဲ့လူတွေမှာ အရိုးထိခိုက်ပျက် စီးမှုနှေးသွားသည်ဟု ယူကေသုတေသနတွေအရတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကယ်လလ်စီယမ်ဓာတ်ပြီးလျှင် အရိုးတည်ဆောက်ရာ တွင် အရေးကြီးဆုံးသော သတ္ထုဓာတ်ဆားအားလုံးရဲ့ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်၏ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း ရုံးပတီသီးမှာပါသည်ဟုဆို၏။
အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော အရိုးကျီးပေါင်းတက်ရောဂါကို သက်သာစေသည်ဟုဆိုသည်။ အဆစ် အမျက်များတွင် အဖြစ်များလေ့ရှိသည်။ ရုံးပတီသီးမှာပါတဲ့ အဟာရဓာတ်များက အဆစ်အမျက်နှင့် အရိုးနုပွန်းစား ခြင်းများကို သက်သာလျော့ပါးစေသည်။ အထူးသဖြင့် အရိုးနုတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အစိတ် အပိုင်း မဂ္ဂနီးကြောင့် ဟုဆို၏။
ရုံးပတီသီးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စိမ်းစိမ်းစိုစိုများကို ဈေးမှဝယ်ပြီး နေ့ချင်းချက်ပြုတ်စားနိုင်လျှင် ပို၍အဟာရ ဓာတ်ကောင်း စေသည်။ ကြေး၊သံ၊ကြေးနီ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အိုးနှင့်ချက်လျှင် မဲသွားတတ်ပါသည်။ ဒန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အိုးမှာ ရေပွက် ပွက်ဆူအောင်တည်ပြီး ရုံးပတီသီးကို ထိပ်ဖြတ် ၍ ရေစင်စင်ဆေးပြီးထည့်ပါ။ ထည့်ပြီး ၁မိနစ်အတွင်း ပြန်ဆယ်ယူ၍ အတုံး လေးများပိုင်းကာ ခရမ်းချဉ်သီးချက်ဖြင့် တွဲစားပါ။ ရုံးပတီသီးကို ခပ်ပါးပါးလှီး၍ ကြော်စားနိုင်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီးမှည့်ဖြင့် လည်း ချက်စားနိုင်သည်။ တစ်ချို့ကင်၍လည်း စားကြသည်၊ ပဲချဉ်ဟင်းတွင်ကုလားပဲခြမ်းပြုတ် သို့မဟုတ် ပဲစင်းငုံပြုတ်ပြီးနှင့် ရုံးပတီသီး၊ ခရမ်း၊ ဘူးသီး၊ ရွှေဖရုံသီး၊မုန်လာဥ၊ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက် စသည်တို့နှင့် ဆီသပ်ပြီး မန်ကျည်းမှည့်ထည့်ခပ်၍ သီးစုံချဉ်ရည်ဟင်း အနေနှင့်လည်း ချက်စားနိုင်ပါသည်။
တစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘီယာ၊ အကင်ရောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကိုရောက်တော့ စားပွဲဝိုင်းအတော် များများမှာ ရုံးပတီသီး ကင်မှာပြီး စားကြတာတွေ့ရလို့ ဖတ်ဖူးတဲ့စာပေထဲက ရုံးပတီသီးရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ ဗဟုသုတအဖြစ်သိစေလိုတာနဲ့ မျှဝေရေးမိလိုက်တာပါ။
ဒီအပျိုကြီးလက်ချောင်းတွေကို ငယ်ငယ်က အဖွားကကြော်ကြွေးရင်မစားချင်ဘူးဗျာ၊
ကုလားပဲဟင်းထဲ ဆိုရင်တော့ ကြိုက်တယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ငံပြာရည်ချက်ထဲမှာ ပြုတ်ပြီးတို့စရာအဖြစ်ဆိုပြန်တော့ ကြိုက်မိပြန်ရော။
ရှာရှာပေါက်ပေါက် အခုတော့လဲ စားကောင်းပြန်ရော။
အသက်ကြီးလာတော့လဲ ဓါါတ်စာဆိုတာတွေကို မစားချင်လဲ စားနေရတာပါဘဲ။
မသေချင်သလို နာလဲ မနာချင်တော့ ဆင်ခြင်လို့ နေရသပေါ့.
ရုံးပတီသီးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကိုရေနွေးနဲ့ စိမ်ပြီးတို့စရာလုပ်စားရတာကို အရမ်းကြိက်ပါတယ်။ တစ်ချို့နယ်တွေမှာဆိုရင် ရုံပတီသီးကို ချောချောသီးဆိုပြီးလဲခေါ်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာမှတ်သားဘူးပါတယ်။ ချောချောသီးလို့ခေါ်တာက ရုံးပတီသီးက ချွဲကျိကျိနဲ့ချောနေတာမို့လို့ထင်တယ် :-)
ကိုကြီးပေါက်ရေ ဘီယာ အကင်ဆိုင်မှာ အခုနောက်ပိုင်း အတော်အစားများလာတယ်ဗျ။ ကိုယ်တိုင်လည်း စားဖြစ်တယ်လေ။ ဦးဆုံးမန့်သူအဖြစ်လည်း ကျေးဇူးနော်။
myanmarcitizen ပြောမှဘဲ အမည်တစ်ခုရတယ် ဘာတဲ့ ချောချောသီးဆိုဘဲ၊ အမည်လေးက မဆိုးဘူးနော်။
ဟင် တိုက်ဆိုင်ချက်။ ကိုခ စာ အစပိုင်းကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ရုံးမတီသီးကင်ကို သတိရနေတာ။
ချဉ်ရည်ထဲပဲ ထည့်ထည့်၊ ကင်စားစား၊ ပြုတ်တို့တို့ စားကောင်းတာပဲ။
ယောက်ျားများ ရုံးပတီသီးကင် မှာစားဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းရဲ့၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့
အဲဒါ..အဲဒါ (ခရက်ဒစ်တူ သဂျီး)
……….. ကို ယားစေအိ
လွတ်လပ်စွာ ကွပ်လပ်ဖြည့်ပါ :harr:
သန့် သန့် လေးမောင်ပေ
ကုလားတွေမှာ.. Bhindi Masala ဆိုပြီးဟင်းချက်နည်းရှိပါတယ်..။
ဖယားဖယား ..သိဒယ်နော်… သိနေဒယ် …
အကြံဇိုးဂျီးနဲ့ စားမှန်း ….
တကယ်တော့ ကျော်လည်း သိပ်ကြိုက်တာဗျ…ရုံးပဒေသီး
လေဒီဖင်းဂါး အော်ကရာ ကို…
သီရိမင်္ဂလာဈေးကြီး ကြည့်မြင်တိုင်မှာ ရှိတုန်းကဆို
အိမ်ကနေ တပါတ်တခါ ဈေးသွားဝယ်တိုင်း
အတောင့် ၂၀၀မျိုး ၃၀၀မျိုးဝယ် နေ့တိုင်း ကင်စားလာတာ..
ချော်ချော်ချွဲချွဲ..အသီးအနှံတွေက.. ဟိုဟာ..ဒီဟာအတွက်ကောင်းတယ်မှတ်… ။
လူဖြစ်မယ့်ဇာတိ..မျိုးစေ့တွေ .. ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့.. မဖျက်ဆီးကောင်းဘူး..။
ပါဏာတိ ပါတာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ…တဲ့..။
ပါဏာတိပါတ ကံ အင်္ဂါ (၅)ပါး ပါဏာတိပါတ ကံထိုက်ဘို့ အချက်ကြီး (၅) ချက် နဲ့ ပြည့်စုံဘို့လိုတယ်။
၁။ ပါဏော = သက်ရှိလည်းဖြစ်
၂။ ပါဏသညိတာ = သတ္တ၀ါလို့လည်း မှတ်ယူ
၃။ ၀ဓကစိတ္တံ = သေစေလိုတဲ့စေတနာလည်းရှိ
၄။ ဥပက္ကမော = လုံ့လအားထုတ်မှုလည်းပြု
တန်ဖိုးရှိအောင်.. တရားဝင်လက်ခံအသုံးပြုပေးမယ့်သူ.. မြန်မြန်ရှာကြ…
မယားငယ်သီးတဲ့လေ ချွဲလို့တဲ့ …….
ရုံးပတီသီးလေးကိုရေနွေးဖျော ငပိထောင်းလေးနဲ့လွေးလိုက်လို့ကတော့
ရုံးပတီသီးကြော်ဆေးဖက်ဝင်လို့ အမေက အိမ်မှာအမြဲဆောင်ထားပြီး အမျိုးမျိုးလုပ်ကျွေးတတ်ပါတယ် … ကြော်တာရော ပြုတ်တာရော ဘာမှမကြိုက်ပါဘူး … ငါးပိစိမ်းစားရယ် ငရုတ်သီးစိမ်းလေးနဲ့ ရခိုင်ချက်ချက်စားရင်တော့ စားတယ် ……
ဟိ ရုံးပတေသီး အကြောင်း. ဂျီးတော် ခိုင်ခိုင်. က အသိဆုံးဗျ. အစ်ကိုရ.
သူက ကိုယ်တွေ့သမား. လက်တွေ့သမား. ခိခိ
အိမ်မှာတော့ အစေ့တွေကြဲထားတာနဲ့ အပင်တွေအသီးတွေက မနိုင်မနင်းပါဘဲ….
အသီးကို ကြိုက်လို့ စိုက်ထားပြီး နေ့ စဉ်လိုစားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့
ခုမှသေချာသိလို့ ..ကျေးဇူးပါ ကိုခင်ခ ရေ….
မိန်းကလေးတွေထက် ယောကျာ်းလေးတွေက ရုံးပတေသီးပိုစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ဘာလို့လဲ သိချင်ပါတယ်
ရုံးပတီသီးလေးကို … မဆလာလေးနဲ့ ဆားပြားနယ်ပြီး နှမ်းဆီနည်းနည်းသုတ်လို့ .. သီတံလေးနဲ့ ကင် ၊ အေးခဲနေတဲ့ ဖန်ခွက်ထဲက အမြှုပ်တစီစီဘီယာလေးနဲ့ဆိုလျှင် … အရမ်းမိုက်ပဲ …
ဘီအီးနဲ့ တော့ မလိုက်ဘူး
ဘီယာနဲ့ ဆိုရင်တော့ အပေါ်က အူးလေးပြောသလို ချယ်ပဲ ဗျ
ရုံးပတီသီးကို ကျန်းမာရေးအရ ဘီယာနဲ့ တွဲချချင်တယ်..ဘီယာဘိုးမစိလို့နှစ်ဂျားဘိုးလောက် မ.စ.တော်မူပါ မိုးနတ်မင်းကြီးခင်ဗျ
ငါ ဘီအီးမူးနေလို့မထနိုင်သေးဘူး
ကိုခင်ခ ဆီက ခဏချီးသွားလိုက်
ထီပေါက်ရင် ပြန်ဆပ်ပေးမယ်လို့ပေါလိုက်
တယောက်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ဗိုက်ဗိုက် မူးနေတာလား ၂ ကိုယ်ခွဲသွားတယ် ဆိုတော့
ဟေ အတိုင်အဖေါက်ညီတဲ့သူတွေတော့ လာကြတော့မှာပေါ့၊
ကိုယ့်လူ ခဏလေးတော့စောင့်နော် ဒီဘီယာဆိုင်က ၃ ခွက် ၁ ခွက် လက်ဆောင်မို့
ကျွန်တော် ၃ ခေါက်သောက်ပြီးရင် လက်ဆောင်ရမယ့် ၁ ခွက် သောက်ဗျာ၊
အဲဒါဆို ပြန်ဆပ်စရာ မလိုဘူးလေ၊ အဆင်ပြေတယ်မလား။
ဟင်းချိုလေးချက်သောက်လည်း ကောင်းမှကောင်း …
လေးဘက်နာသမားတွေ ချဉ်ဆီ ခမးခြောက်ခြင်းအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်လို့သိရပါတယ် …
ရုံးပတီသီးစား မယားမသိစေနဲ့တဲ့.။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ၊ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ ဖြေဆိုပါ။ (၁၀မှတ်)
မယားသိရင် ကားသွားမှာပေါ့ (ထားသွားမှာစိုးလို့ ဗျင်းခံထိတာ :mrgreen:)
သားရေစာအဖြစ်ရောင်းချကြတယ်။ ကြိုက်လွန်းလို့ ဝယ်စားဖြစ်တယ်။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘာဝတရားဖြစ်နေတာမို့ အရိုးအဆစ်ခိုင်မာမှုရှိအောင်စားသုံးပေးပါတဲ့လေ။။
ဦးဦးခင်ခင်ခခ ၇ဲ့ 
အင်မတန် အကျိုး ရှိပါတယ်လို့ ..ပြောပါရစေ..ခည ။